GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Echekwala na o nweghị ihe ị ma. Ịga akwụkwọ nwere ike ime ka ị mata ihe ndị ị na-amaghị na ị ma. Pọl degaara Timoti akwụkwọ, sị: ‘ Mee ka onyinye Chineke nke dị n’ime gị nwuo dị ka ọkụ. ’ (2 Timoti 1:6) O doro anya na Chineke si n’ike mmụọ nsọ nye Timoti onyinye ọ ga-eji na-eme ihe bara uru. Ma, o kwesịrị iji ike ahụ Chineke nyere ya, ya bụ, onyinye o nyere ya, na-eme ihe bara uru, ka onyinye ahụ ghara ifu ọhịa. Ihe anyị na-ekwu abụghị na Chineke nyere gị onyinye i ji amụ ihe n’ụlọ akwụkwọ. Ma, onyinye ndị ahụ i nwere dị iche n’onyinye e nyere ndị ọzọ. Ịga akwụkwọ nwere ike inyere gị aka ịmata onyinye ndị ị na-amabughị na i nwere. Ọ ga-enyekwara gị aka iji ha na-eme ihe bara uru.